STEAM ANAGHỊ EJUPỤTA PEEJI NKE: IHE NA NGWỌTA - STEAM - 2019
Steam anaghị ejupụta na peeji nke. Ihe ị ga-eme
Njehie dịka "Ugbua iji kwupụta launcher.dll" na-emekarị mgbe ị na-agbalị ịmalite egwuregwu na Isi Iyi: Vampire The Masquerade: Bloodlines, Half-Life 2, Counter-Strike: Isi mmalite na ndị ọzọ. Ụdị ozi dị otú ahụ na-egosi na ọbá akwụkwọ dị ike akọwapụtaghị na ebe dị mma. Enweghi ike na Windows XP, Vista, 7 na 8, mana ọ na-egosi na XP.
Ngwọta maka Emezighị ka ibuo nsogbu launcher.dll
Nke a bụ njehie doro anya, na ụzọ idozi ya dị iche na nkwụsị DLL ndị ọzọ. Ụzọ mbụ na kachasị mfe bụ ịmegharị egwuregwu ahụ, ọkacha mma na disk ọzọ ma ọ bụ ezi uche. Usoro nke abuo bu ichoputa iguzosi ike n'ezi nke oghere egwuregwu na Steam (nke bara uru maka ndi oru nke ikpo okwu a).
Biko mara na nbudata onwe gị na ịwụnye ọbá akwụkwọ na-efu na nke a agaghị adị mma!
Ụzọ zuru ụwa ọnụ iji dozie nsogbu a bụ iji dozie egwuregwu ahụ na nhichapụ ndekọ ahụ.
Tupu ịmalite ọrụ, anyị na-akwado ịlele ikwesị ntụkwasị obi nke nkesa echichi nke egwuregwu ahụ, dịka ọmụmaatụ, site na ịlele ego ego ego site na enyemaka nke mmemme pụrụ iche: enwere ike ịnweta ma ọ bụ depụtaghachi onye nlele ahụ na njehie, nke mere na anaghị etinye faịlụ niile. N'ọnọdụ nsogbu, budata nkesa ọzọ.
Ọ bụrụ na nzọụkwụ mbụ gosiri na ihe niile dị n'usoro, ịnwere ike ihichapụ egwuregwu ahụ. Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ, mana ọ bụ ihe ndị kasị adaba ka a kọwara n'isiokwu a. Ndi oru uzo ugbo agha gua ihe di n'okpuru.
Gụkwuo: Wepụ egwuregwu na Steam
Hichaa ndekọ nke ndenye ederede na ihe mkpofu. A kọwara usoro dị iche iche dị mfe nke usoro a na ntụziaka kwekọrọ. I nwekwara ike ịrịọ maka enyemaka sitere na ngwanrọ pụrụ iche dị ka CCleaner.
Tinye egwuregwu ahụ ọzọ, ọkacha mma na disk ọzọ. Jiri nlezianya na-agbaso omume ntinye - njehie ọ bụla mgbe nrụnye na-egosi nsogbu na nkesa, ma ọ ga-abụ na ị ga-achọta ihe ọzọ.
Ọ bụrụ na enweghi nsogbu na Nzọụkwụ 4, nrụnye ahụ ga-arụcha nke ọma, na ịmalite nke egwuregwu ahụ ga - eme n'enweghị nsogbu.
Usoro 2: Lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke egwuregwu ahụ na Steam
Ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime egwuregwu ebe launcher.dll na-enwe nsogbu na-ere na Steam, ịlele nweta faịlụ dị mkpa na cache ngwa ga-abụ ngwọta dị irè. Ọ dịghị ihe ọ bụla zoro ezo na onye ọ bụla na n'ihi nsogbu na PC ma ọ bụ njikọ Ịntanetị, ntanetị ọrụ ntanetị si Steam nwere ike ịda, nyochaa faịlụ ndị ebudatara. Ị nwere ike imata onwe gị na ntụziaka maka ịhazi usoro a n'ime ihe dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Ilele iguzosi ike n'ezi ihe nke oghere egwuregwu na Steam
Mmetụta nke usoro a doro anya - naanị ndị Steam nwere ike iji ya. Nte ededi, ke idaha enye emi, utịp utịp ama ọfọn ama.
Anyị na-echetara gị banyere uru nke iji ngwanrọ licensed - na ngwaahịa ndị a na-enweta na iwu na ihe gbasara nke puru ịbanye na njehie na-efu efu!